अघोर बाबाको भन्दा कडा ब्रुस्ली किक देखाए जंगी बाबाले , रातारात किन यस्तो डरलाग्दो रुप देखाए त ?(भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
अघोर बाबाको भन्दा कडा ब्रुस्ली किक देखाए जंगी बाबाले , रातारात किन यस्तो डरलाग्दो रुप देखाए त ?(भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki November 2, 2019
झापा , दमक । मृतुन्जय अघोरी बाबा अहिले विभिन्न सामाजिक संजाल लगायत सोसल मिडियामा भाइरल भैरहेको बेला फेरी मोरंगमा १ जना जंगी बाबा नाम गरेका बाबा देखा परेका छन् । आफ्नो नाम जंगी बाबा बताउने बाबा २५ बर्षको उमेर बाट घर छोडेको बताएका छन् । अघोर बाबाको जस्तै उनि पनि बोल्नमा धेरै खुलेर बोल्ने बाबा रहेछन । उनले खुलेर आफ्नो प्रेम र से,क्सको बारेमा आफ्नो बिचार राखेका छन् ।मोरंगको उर्लाबारीमा उनि अहिले बस्दै आएका छन् ।
अघोर बाबाको बारेमा र बम्जनको बारेमा उनले खुलेर आफ्नो विचार राखेका छन् । बाबा धेरै प्रकारका भए पनि बाबाको कर्म गर्ने कम छन् भन्दै उनले आफु योग सम्बन्धि राम्रो बाबा भन्दै दाबि गरेका छन् । उनि मोरंगको उर्लाबारीमा भर्खरै आएर बसेको बताएका छन् । हामी बेलुका ६ बजे पुग्दा जंगी बाबाको अर्को रुप देखेका छौ । एकान्त खोलाको बगरमा गएर विभिन्न आशन गरेको भिडियो हेर्नुहोला ।